बिहेको कुरा गर्दा यस्तो रुखो जवाफ दिदै किन रिसाईन त दिपिका ? - सुदूरखबर डटकम
बिहेको कुरा गर्दा यस्तो रुखो जवाफ दिदै किन रिसाईन त दिपिका ?
बलिउडमा विवाह र प्रेम प्रसंगले निक्कै माहोल तताईरहन्छ । यस्तैमा अहिले दिपिकाको र रणवीरको विवाहको निक्कै चर्चा चल्न थालेको छ । उनिहरुको विवाहको विवाह गर्ने निक्कै चर्चा चलिरहदा पनि यि दुई जोडीले भने आफ्नो विवाहको प्रसंगलाई स्विकारेका छैनन् ।
दिपिका हालै एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पुग्दा एक पत्रकारले सोधिहाले, ‘तपाईं र रणवीरको बिहे नोभेम्बरमा हुन लागेको हो ?’ उक्त प्रश्नलाई दिपिकाले सहजरुपमा लिइनन् । उनले सुरुमा असम्वन्धित प्रश्न भन्दै पन्छाइन् । तर, पत्रकारले दोहोर्‍याएर सोधे । त्यसपछि भने दिपिका आगो भइन् । ‘कस्तो ठाउँमा के प्रश्न सोध्ने भन्ने कमन सेन्स छैन तपाईंको ?’ उनले भनिन्, ‘यति संवेदनशील मुद्दामा छलफल भइरहेको बेला कहाँबाट आयो मेरो बिहेको कुरा ?’
खासमा त्यो कार्यक्रममा उनी आफ्नो डिप्रेसनसम्वन्धि अनुभव सेयर गर्न पुगेकी थिइन् । दिपिका केही वर्षअघि गम्भीर डिप्रेसनबाट प्रताडित बनेकी थिइन । त्यतिबेलाको अनुभव उनले धेरै ठाउँमा सेयर गरिसकेकी छन् । डिप्रेसनबाट निस्किन आफूलाई ब्याडमिन्टनले सघाएको उनी बताउने गर्छिन् ।
दिपिकाको पछील्लो समय हिट फिल्म ‘पद्मावत’ गरेर निक्कै चर्चा कमाएकी हुन् । ‘पद्मावत’पछी उनी नयाँ फिल्ममा काम गर्ने चर्चा चलिरहेको छ ।